အပူ ဓာတ် သန့်စင် ပစ္စည်း များ တည်ဆောက် ခြင်း ၏ အပူ စွမ်းအင် စီမံ ဆောင်ရွက် မှု-Jinan Zhengtang Insulation Insulation Insulation ပစ္စည်း Co.Ltd
အပူ ဓာတ် သန့်စင် ပစ္စည်း များ တည်ဆောက် ခြင်း ၏ အပူ စွမ်းအင် စီမံ ဆောင်ရွက် မှု
စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သန့်စင်ရေးအဝတ်ကို ဆုံးဖြတ်နေရင်း ဖောက်သည်တွေက အပူပေးနိုင်စွမ်းကို ဦးဆုံး လေ့လာဆန်းစစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ အပူပေးဆောင်နိုင်စွမ်း ပိုနည်းလေ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ သန့်စင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံး ပိုမြင့်လေဖြစ်ပေမဲ့ သန့်စင်ထားတဲ့ အထည်အထည်က တကယ့်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ အပြည့်အစုံ သန့်စင်ရေးကိရိယာဆီ အဆင့်မြှင့်လိုက်ရင်တော့ အပူစွမ်းသတ္တိက သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ အဆိုပါ ကိရိယာ ၏ အပူ စွမ်းအင် စီမံ ခန့်ခွဲ မှု သည် အပူ ထိန်းချုပ် မှု အထည် ၊ ရေ လောင်စာ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အပူချိန် အခြေအနေ ၊ သွေးမဲ့ တံတား ၊ ဒီဇိုင်း တည်ဆောက်ပုံ နှင့် ဖန်တီး မှု နည်းပညာ တို့ ၏ အသုံးစရိတ် အတိုင်းအတာ ကို ခံစား နေ ရ ကြောင်း သက်သေပြ ခဲ့ သည် ။
သာမန် XPS, EPS, EPS၊ Blite foam ပန်းကန်၊ အမြှုပ်ဖန်ခွက်၊ ကျောက်ဆောင်သိုးမဲပြား၊ အမျိုးမျိုးပေါ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးစရိုက်လက္ခဏာများကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးစရိုက်လက္ခဏာများကြောင့် ဘော်ဒါ-အမျိုးအစား ကပ်ထားတဲ့ အင်္ဂတေကို ပါးလွှာတဲ့ အင်္ဂတေစနစ် စနစ်လိုမျိုး ယေဘုယျကို နံရံပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် နံရံပေါ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့အတွက် မလွဲမသွေ အက်ကြောင်းတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ စနစ်ရဲ့ အပူနဲ့ ချမ်းအေးတဲ့ တံတားတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ တခြားတံတားတွေဟာ အပူပေးနိုင်စွမ်းထက် ၂ ဆလောက် ပိုမြင့်မားတဲ့ ပစ္စည်းတွေထက် ၂ ဆလောက် ပိုမြင့်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သူအချို့က အော်ဂဲနစ်အမြှုပ်ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ အပူစွမ်းသတ္တိသည် ၀.၃၇ w/k. C. 0.37 w/k. C. ၀.၁၅ ဒဗလျူ/မီတာအထိ မြင့်မားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ Inorganic Light သန့်စင်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့၏ အပူပေးနိုင်စွမ်းမှာ 0.055 W/M.K. ခန့်ဖြစ်ပြီး စနစ်၏ အပူပေးဆောင်နိုင်စွမ်းမှာ ၀.၁၅ ဒဗလျူ/ကေ. ၀.၁၅ ဒဗလျူ/ကေ. အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ဒီသန့်ရှင်းရေး ဘုတ်အဖွဲ့ကို နံရံပေါ်မှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းက သန့်စင်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုစီ ပတ်ပတ်လည်မှာ ကွာဟချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမယ်၊ ထို့အပြင် သံချောင်းများ အိုမင်းခြင်း၊ အပူချိန် ယိုယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျုံ့ခြင်း အဆစ်များ၊ လေထုနံရံ နှင်းဆီ နှင်းကျခြင်း၊ ရေ-လေလည်လည်ပတ်မှု အတားအဆီး၊ ပစ္စည်းနှင့် စနစ်၏ အရည်အသွေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု စသည့် အကြောင်းရင်းများ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ် တွင် ၊ ပန်နယ် အက်ကြောင်း များ နှင့် အအေး နှင့် အပူ တံတား များ ကို ထိရောက် စွာ ရှောင်ရှား နိုင် သော ဈေးကွက် တွင် ထိရောက် မှု အများဆုံး သန့်စင် ရေး စနစ် သည် ယင်တန် ၊ ယင်တန် ၏ ဝိုင်တီ အော်တိုဂနစ် သန့်စင် ခြင်း နှင့် အပူ ကာကွယ်ရေး စနစ် ဖြစ် သည် ။ YT သန့်စင်ရေးပစ္စည်းသည် စက်ရုံမှထွက်ခွာသည့်အခါ အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ရေနှင့် ရောစပ်ထားရုံသာ လိုအပ်ပြီး နံရံပေါ်တွင် ဆေးသုတ်နိုင်သည်။ ၎င်း သည် အလွန် အဆင်ပြေ ပြီး အသားတင် - ကင်းလွတ် သော ဆောက်လုပ် ရေး ကို အကောင်အထည်ဖော် နိုင် ပါ သည် ၊ ထို့ကြောင့် ပန်းကန်ပြား ခွဲ ခြင်း ၊ အက်ကွဲ ခြင်း ကို ဆန့်ကျင် သော မော်တာ နှင့် အန်ခါ ဘော့ ကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့် များ ကို ချန်လှပ် ထား ပြီး ၊ သန့်စင် ခြင်း စနစ် တစ် ခု လုံး ၏ အပူ ထိန်းချုပ် မှု ကို အကြီးအကျယ် သေချာ စေ ခဲ့ သည် ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် နံရံပေါ်ရှိ YT သန့်စင်ရေးပစ္စည်း၏ ≤၀.၀၅၅ ဖြစ်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် အိမ်တွင်းအပူချိန်ကို ၆-၁၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ဖြင့် တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး နွေရာသီတွင် ၆-၈ စင်တီဂရိတ်ဖြင့် လျော့နည်းသွားနိုင်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာရေး လိုအပ်ချက် ၆၅-၇၅ % ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် ။ YT သန့်စင်ရေး ပစ္စည်း အဆင့်တစ်ခုဟာ မီးတောက်လို့မရဘူး၊ ဒါက အစဉ်အလာ သန့်စင်ပေးတဲ့ ရွှံ့စေးပြားကို အလွယ်တကူ ဖြိုခွဲပြီး ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ပြဿနာကို ကျော်လွှားနိုင်ရုံသာမကပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သန့်စင်နိုင်တဲ့ တံတားနဲ့ အော်ဂဲနစ် သန့်စင်ရေးပစ္စည်းတွေရဲ့ မီးလောင်လွယ်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားတဲ့ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး စနစ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်မှုမှာတော့ ပုံမှန် ထုတ်လုပ်သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်။
တရုတ် နိုင်ငံ ၏ ဆောက်လုပ် ရေး စွမ်းအင် ကယ်ဆယ် ရေး နည်းဗျူဟာ သည် ၊ ဘေဂျင်း တွင် အစောပိုင်း အသုံးချ မှု မှ ၊ အမျိုးသား မဖြစ်မနေ မြှင့်တင် ခြင်း အထိ ၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာ ခဲ့ ပြီး ၊ ဆောက်လုပ် ရေး စွမ်းအင် သုံးစွဲ မှု လျှော့ချ ခြင်း တွင် ပစ္စည်း များ နှင့် ဆက်စပ် သော စနစ် များ သည် လည်း အရေးကြီး သော အခန်း ကဏ္ဍ တစ် ခု ပါဝင် ခဲ့ သည် ။ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းမှာ ကွဲပြားခြားနားသည်။ အပူပေးပစ္စည်းနှင့် သန့်စင်ရေးစနစ်တစ်ခုစီ၏ အပူပေးဆောင်နိုင်စွမ်းမှာ ကွဲပြားခြားနားပြီး ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းမှာ ကွဲပြားခြားနားသည်။ အသုံးပြုသူများသည် နေရာတစ်ခုစီ၏ အမှန်တကယ်အခြေအနေအရ အကြောင်းအရာကို တင်းကျပ်စွာရွေးချယ်သင့်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်စွမ်းအင်စွမ်းအင်ကို ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေထည့်ဝင်စေရန် အပူဓာတ် သန့်စင်ခြင်း၏ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသော အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စံသတ်မှတ်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။